သင် B2B လွှဲပြောင်းမှုများပိတ်နေသောမည်သည့်အတွက်သင်အံ့သြသင့်မည်နည်း Martech Zone
သင် B2B လွှဲပြောင်းမှုများပိတ်နေသောမည်သည့်အတွက်သင်အံ့သြသင့်မည်နည်း
တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 5, 2015 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
မည်သည့် B2B ကုမ္ပဏီမှမဆိုအရောင်းယန္တရားကိုညှိနှိုင်းပြီးကောင်းမွန်စွာဆီထားသင့်သည်၊ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့အမှန်တကယ်ထူးခြားမှုရှိစေရန်မြန်နှုန်းအပြည့်ဖြင့်လည်ပတ်ရမည်။ ကုမ္ပဏီများစွာသည်အအေးခေါ်ဆိုမှုများမှတဆင့်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုအလွန်မှီခိုနေရခြင်းကြောင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းခံစားကြရသည်ဟုယုံကြည်သည်။ သို့သော်သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်အောင်မြင်မှုရရန်ခက်ခဲသောအလုပ်များကိုလုပ်ရန်သင့်တော်သောအသင်းမရှိ။
Insight Venture Partners ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်အောင်မြင်သောဆော့ဝဲလ်အတွက် CEO နှင့် CEO ဖြစ်သူသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ထရစ်ကိုမကြာသေးမီကမျှဝေခဲ့သည်။ ဖောက်သည်အသစ်ရရှိရန်အတွက်အလုပ်များစွာလိုအပ်သည်။ နေ့တိုင်းပြေးထွက်နေပြီးမတူကွဲပြားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်မထားသောအဖွဲ့တစ်ခုသင်၌မရှိပါ။
မင်းလုပ်နိုင်လား သင်အားသာချက်ယူရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အခြားမည်သည့်အရာထက်မဆိုပိုမိုမြင့်မားစွာပြောင်းလဲသော B2B စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အရင်းအမြစ်တစ်ခုရှိပါသည်။
ရုပ်သံလိုင်းအားဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အခါရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုသည်ရှင်းလင်းသောအောင်မြင်သူတစ် ဦး အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသည်။ သုံးစွဲသူများနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏ရည်ညွှန်းချက်များသည်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကို ၃.၆၃% ရရှိပြီးနောက်လိုင်းထက်နှစ်ဆနီးပါးရှိသည်။ လူမှုရေးနှုန်း 3.63% ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းရှိပြီးရှာဖွေရေး 1.55% ပေးဆောင်။ အဆိုးရွားဆုံးလုပ်ဆောင်သောလမ်းကြောင်းများမှာ ၀.၀၂% ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်း၊ ၀.၀၄% ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းနှင့်ဖြစ်ရပ်များနှင့် ၀.၀၇% ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းထားများရှိသော ဦး ဆောင်စာရင်းများဖြစ်သည်။ Gilad Raichstain၊ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့အဖြေများမိတ်ဖက်များနှင့်စကားပြောသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲအံ့အားသင့်မိပြီး၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်ဝန်ထမ်းသို့မဟုတ်ဖောက်သည်ရည်ညွှန်းမှုများအားဆုချသည့်အစီအစဉ်မရှိချေ။ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် (သို့မဟုတ်) ဖြစ်သင့်သည် - သင့်ကိုသူတို့၏ကွန်ယက်များပေါ်တွင်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဖောက်သည်များမှာအခြားအံ့ဖွယ်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်တွင်မည်သူ့ကိုမဆိုရည်ညွှန်းလိုပါသလားဟုမေးမြန်းခြင်းသည်အခါအားလျော်စွာအီးမေးလ်ရှိပါသလား။ ထိုလွှဲပြောင်းမှုများအတွက်ဆုအချို့သို့မဟုတ်ငွေသားပေးပါသလား။ ဤအချက်အလက်များသည်သင့်ကိုစတင်စေနိုင်သည်။
အနည်းဆုံးတော့သင်၏ ၀ န်ထမ်းများ၊ ဖောက်သည်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအကြားဖြန့်ဝေထားသောထူးခြားသောလင့်ခ်များပါ ၀ င်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုကိုဖမ်းယူနိုင်သည့် landing စာမျက်နှာတစ်ခုရှိခြင်းသည်သင်၏ ဦး စားပေးမှုတွင်မြင့်မားသင့်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အကောင်းဆုံးရည်ညွှန်းချက်များကိုခြေရာခံရန်နှင့်ဆုချရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
အကျိုးမရှိ သင်နှင့်သင့်အဖွဲ့ကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည့်အလုပ်များတွင်အဖိုးတန်အချိန်ကိုချွေတာစဉ်သင့်ပိုက်လိုင်းကိုပိုမိုထိရောက်စွာစီမံခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်သင်၏အလားအလာနှင့်ဖောက်သည်ဆက်သွယ်မှုကိုသင့်လျော်သော CRM မှတ်တမ်းသို့အပ်ဒိတ်လုပ်သည်။ Implisit သည်အီးမေးလ်၊ အဆက်အသွယ်နှင့်ပြက္ခဒိန်တစ်ခုချင်းစီကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး၎င်းသည်မှန်ကန်သောအခွင့်အရေးနှင့် 100% အလိုအလျောက်ကိုက်ညီသော algorithms ကိုအသုံးပြုသည်။
Tags: b2bb2b အခြေခံစံနှုန်းb2b လွှဲပြောင်းb2b ရောင်းအားGilad Raichstainရာဝတီ
အဘယ်ကြောင့် Infographics အကြောင်းအရာစျေးကွက်အတွက်ပကတိမဖြစ်မနေဖြစ်ကြသည်
နံပါတ် (၁) မေးခွန်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူများသည်သင်၏လုပ်ငန်းအကြောင်းမေးပါလိမ့်မည်
ချစ်သူများနေ့ 2015 ပုံရိပ်များ
ဇန်နဝါရီ 6, 2015 မှာ 5: 31 AM
ဝိုး အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့စ်ပါ။ မင်းအရာအားလုံးကို ကောင်းကောင်းပုံစံနဲ့ ဖော်ပြတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
သြဂုတ်လ 20 ရက် 2015 ခုနှစ် 10:53 နာရီ
Doug၊ ကျွန်ုပ်သည် ယခုနှစ် (2015)တွင် ကျွန်ုပ်၏အသင်းကြားတွင် လွှဲပြောင်းပေးမည့် အစီအစဉ်ကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ငါလုပ်ဖူးသမျှ အကောင်းဆုံးအရာ။ တော်တော်ရိုးရှင်းတဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်၏အဖွဲ့၀င်တစ်ဦးမှ ဖောက်သည်အသစ်တစ်ဦးကို ကျွန်ုပ်တို့၏အစုစုထံသို့ ယူဆောင်လာသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ထိုဝန်ထမ်းအား ဝဘ်ဆိုဒ်ဒီဇိုင်းတည်ဆောက်မှု၏ 5% ဖြင့် ဆုချပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူတို့က $10,000 ဝဘ်ဆိုဒ်ပရောဂျက်ကို ရည်ညွှန်းမယ်ဆိုရင် ဒေါ်လာ 500 ဘောနပ်စ်တွေ ရလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်၏အဖွဲ့သည် ဤအစီအစဉ်ကို နှစ်သက်ပါသလား။ ဟေ့! ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ကြိုက်တယ်။
သြဂုတ်လ 21 ရက် 2015 ခုနှစ် 1:02 နာရီ
အဲဒါ အရမ်းကောင်းတဲ့ Greg ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရည်ညွှန်းခြင်းအစီအစဉ်များကိုနှစ်သက်သည်။ တစ်ချို့လူတွေက ဒါဟာ ထူးဆန်းတဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခုလို့ ထင်ကြပေမယ့် ကုမ္ပဏီတွေက လုပ်ငန်းကို တွန်းအားပေးရာမှာ အရောင်းဝန်ထမ်းတွေကို တစ်ချိန်လုံး ပေးချေကြတယ်... မင်းရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ဘာလို့ လစာမပေးတာလဲ။